Big Bad Wolf Book Sale Going Online This Year | Myanmar Business Today
HomeBusinessBig Bad Wolf Book Sale Going Online This Year
The Big Bad Wolf Book Sale, the World’s Biggest Book Sale, will be returning to Myanmar from December 23rd to 30th December 2020 – but this time the event will be held entirely online at the Big Bad Wolf Book Sale’s official website.
Redesigned to cater to the current need for safe browsing, the Big Bad Wolf Online Book Sale will offer 20 million English-language books and over 40,000 book titles up to 90% off their recommended retail prices.
Readers of all kinds can enjoy the vast offerings at this year’s virtual fair, where they will find bestsellers, science fiction, romance, literature, graphic novels, business books, self-help guides, architecture books, cookbooks, and many more, all organized for convenient browsing under one website. During the sales also known for its extensive collection of children’s books – parents can choose from storybooks, activity books, board books, coloring books, picture books, and interactive books to keep their children occupied and safe in the comfort of their homes.
“When the pandemic struck earlier this year, the safety of our shoppers and staff was our main priority,” said Jacqueline Ng, Co-Founder of Big Bad Wolf Books. “That is still true, but we do not want it to hamper our ongoing mission to buildanew generation of readers and spread the joy of reading. Our team is dedicated to ensuring that book lovers in Myanmar can still enjoy affordable books at their favorite Book Sale. With our new e-commerce platform, everyone in Myanmar can buy books at this year’s Big Bad Wolf Online Book Sale safely, no matter where they are.”
With lockdowns and social distancing in effect through many parts of Myanmar, Big Bad Wolf Online Book Sale hopes to provide entertainment in the comfort of their own homes with its vast library of books. To do so, the Online Book Sale is offering exciting promotions across categories such as Scholastic Interesting Facts, White Star Classic Fairy Tales, and Magical Books Deal. Consumers can also enjoy special discounts such as Free Shipping.
Established in Petaling Jaya, Malaysia, in 2009, the Big Bad Wolf Book Sale spans across 12 countries in 34 cities, including Myanmar, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, The Philippines, Cambodia, South Korea, the United Arab Emirates, Pakistan, Taiwan, and most recently, Singapore. The most recent Big Bad Wolf Book Sale in Myanmar was held in Yangon on January 10-20 of this year.
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ဈေးပွဲတော်ဖြစ်သော Big Bad Wolf Book Sale သည် စာပေချစ်သူများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၃ရက် မှ ၃၀ ရက် အထိ ၈ ရက်တိတိ Big Bad Wolf ၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ တစ်ဆင့် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ Big Bad Wolf Book Sale သည် Covid – 19 ဖြစ်ပွားနေသော ကာလအတွင်းတွင် စာအုပ်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဝယ်ယူနိုင်သည့် ပုံစံအသစ်ဖြင့် စီစဉ် ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Big Bad Wolf Book Sale တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား စာအုပ်အရေအတွက် သန်း ၂၀ နှင့် စာအုပ်ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား ၄၀,၀၀၀ ကျော်တို့ကို ၎င်းတို့၏ လက်လီစျေးနှုန်းများမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့စျေးဖြင့် ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ စာပေချစ်သူများအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် စာအုပ်အမျိုးအစားများစွာကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အရောင်းရဆုံးစာအုပ်များ၊ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများ၊ အချစ်ဝတ္ထုများ၊ စာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ ဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုများ၊ စီးပွားရေးစာအုပ်များ အစရှိသည်တို့ကို ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အဆင်ပြေပြေ ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Big Bad Wolf သည် ၎င်း၏ အမျိုးအစား စုံလင်လှသော ကလေးစာအုပ်များကြောင့်လည်း လူသိများလျက်ရှိပြီး ယခု စျေးရောင်းပွဲတော်တွင်လည်း ကလေးငယ်များအနေဖြင့် မိဘများနှင့်အတူ နေအိမ်တွင် လုံခြုံစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ပုံပြင် စာအုပ်များ၊ လှုပ်ရှားမှုစာအုပ်များ၊ ရုပ်ပြစာအုပ်များ၊ ဆေးရောင်ခြယ်စာအုပ်များ၊ ရုပ်ပုံစာအုပ်များနှင့် Interactive ပြုလုပ် နိုင်သော စာအုပ်များကိုပါ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Big Bad Wolf Books ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Jacqueline Ng က “ ဒီနှစ်အစောပိုင်း ကပ်ရောဂါ စဖြစ်ကတည်းက ကျွန်မတို့ရဲ့ အဓိက ဦးစားပေးဟာဆိုရင် စျေးဝယ်သူတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံမှုပါပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒါပေမဲ့လည်း စာဖတ်သူမျိုးဆက်သစ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ စာဖတ်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုကို ဖြန့်ဝေရမယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို အခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် အဟန့်အတားဖြစ်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စာအုပ်ချစ်သူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး စာအုပ်တွေကို စာအုပ်ရောင်း ပွဲတော်မှာ လက်လှမ်းမီတဲ့ စျေးနှုန်းတွေနဲ့ ရရှိနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ e-commerce ပလက်ဖောင်းအသစ်နဲ့ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူတိုင်းဟာ ဘယ်နေရာကနေမဆို ဒီနှစ် Big Bad Wolf Book Sale ကနေ စာအုပ်တွေကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဝယ်နိုင်မှာပါ” ဟု ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသွားအလာကန့်သတ်ချက်များနှင့် Social Distancing များကြောင့် Big Bad Wolf အွန်လိုင်း စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်မှ တစ်ဆင့် စာအုပ်များကို သက်သောင့်သက်သာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး များစွာသော စာအုပ်များနှင့်အတူ လူအများအိမ်တွင် နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အချိန်များပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန် မျှော်လင့်သည်။ ထိုကြောင့် Big Bag Wolf သည် Scholastic Interesting Facts ၊ White Star Classic Fairy Tales နှင့် Magical Books Deal စသည့် အမျိုးအစားများတွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ပရိုမိုးရှင်းများကို ကမ်းလှမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူများအနေဖြင့် Free Shipping ကဲ့သို့သော အထူးအခွင့်အရေးများကိုလည်း ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်းလိုင်းကနေ ကျင်းပပြုလုပ်ရောင်းချသွားမည့် Big Bad Wolf Book Sale ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာကို မကြာမီ သတင်းထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Online Book Sale ၏ နောက်ဆုံးသတင်းများကို Big Bad Wolf Book ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်လည်း https://www.facebook.com/bbwbooksmm/ ကြေညာသွားမည်ဖြစ်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ Petaling Jaya တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Big Bad Wolf စာအုပ်အရောင်းပွဲတော်သည် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ UAE နိုင်ငံများ၊ ပါကစ္စတန်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် နောက်ဆုံး ပါဝင်လာသော စင်္ကာပူ တို့အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံရှိ မြို့ ၃၄ မြို့တွင် လှည့်လည် ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့သော Big Bad Wolf စာအုပ်အရောင်းပွဲတော်ကို မကြာသေးမီက ရန်ကုန်မြို့၌ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ရက်မှ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Previous articleSolarHome Closes $2Million Series A-2 Equity Round
Next articleWholesale Association Ask for the Use of Expressway to Transport Fruit Trucks